सुनको माने | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! सुनको माने | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
यदि तपाईं घोडाहरू प्रेम वा तिनीहरूलाई चढेर, तपाईं यसलाई साहसिक र जस्तै मानिसहरूलाई को सबै भन्दा राम्रो अर्थमा दिन्छ सहमत हुनेछन्, तिनीहरू पनि हाम्रो इतिहासको एउटा ठाउँ. अलेक्जेन्डर जस्तै ठूलो योद्धाहरू घोडाहरू बारेमा Obsessions छन्. यो अनलाइन बोनस स्लट स्वागत खेल यस्तो अद्भुत विषय आधारित छ. सुनको माने बाट जीत दस सक्रिय शर्त लाइनहरू पाँच रील छ. यो स्लट पहाड र रूखहरू वरिपरि संग एक सुंदर परिदृश्य को दृश्य भन्दा सेट गरिएको छ. एक महाकाव्य संगीत खेल पनि अधिक रोमाञ्चक बनाउँछ. यो खेलको wagering सीमा 15p देखि सुरु र तपाईं £ 150 हरेक स्पिन गर्न सबै बाटो बढाउन सक्छ.
सुनको माने विकासकर्ता बारेमा
थिम्ड यो adventurous घोडा विकासकर्ता अनलाइन बोनस स्लट स्वागत खेल अर्को उत्प छ. तिनीहरूले स्लट सयौं र क्यासिनो उद्योग मा समृद्ध अनुभव को दुई दशक भन्दा बढी संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय विकासकर्ताहरूले को एक हो. आफ्नो खेल विभिन्न मोबाइल फोन र ट्याब्लेटको समर्थन.
नेत्रहीन, यो खेल केही आश्चर्यजनक ग्राफिक्स र एनिमेसन प्रभाव संग धेरै जादुई देखिन्छ. यो को प्रतीक अनलाइन बोनस स्लट स्वागत खेल सेतो र कालो stallions छन्. तिनीहरूले उच्च मूल्य प्रतीक हो र क्रमशः तपाईं 700x तिर्न र 350x को रील मा एक प्रकारको पाँच संग. रंगीन रूख र सुन्तलाको रूख एक पहाड पछि सूर्योदय को दृश्य दुई मध्यम जीत प्रतीक हो. कम जीत व्यक्तिहरूलाई ऐस देखि प्ले कार्ड हो970x र 150x बीच कि तलब. सुन्दर hairs र नाल संग सुनको घोडा तपाईं बोनस अनलक मदत गर्न दुई प्रतीक हो.
जंगली बोनस: सुनको घोडा को प्रतीक यो जंगली छ अनलाइन बोनस स्लट स्वागत खेल. यो सबै बोनस नाल भन्दा अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन. पाँच wilds पनि 1500x को एक प्रभावशाली इनाम तिर्न. धेरै जंगली प्रतीक landings तपाईं प्रतीक WINS को एक ठूलो संख्या बनाउन मदत र यसैले तपाईं यस्तो अवस्थामा ठूलो जित्न सक्छौं.
स्क्याटर बोनस: को नाल प्रतीक यो खेल र तीन वा रील मा बढी को स्क्याटर तपाईं निःशुल्क spins दिन छ. तपाईं पनि दुई र तीन landings संग 10x र 30x को शर्त multipliers जित्न सक्छौं. निःशुल्क spins पनि पटक कुनै पनि नम्बर retriggered गर्न सकिन्छ.
सारांश: यो सबै भन्दा राम्रो घोडा थिम्ड छ अनलाइन बोनस स्लट स्वागत आश्चर्यजनक दृश्यहरू र सुविधाहरू मन उड्ने संग खेल. प्लेयर गर्न सैद्धान्तिक फिर्ती यहाँ छ 96.96% जो धेरै लाभदायक छ.